Q and A Over 18 Readings (80)
1. အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ လ ရှိပါပြီ။
2. အသက် ၃၁ နှစ်၊ မိန်းကလေး၊ အိမ်ထောင်မရှိပါ။
3. သမီးရဲ့အဒေါ် (အသက် ၄ဝ ဝန်းကျင်။ ယောက်ျားရှိ။)
6. ကျွန်တော်ကောင်မလေး ဖြစ်နေတာပါ။
Tue, Oct 9, 2012 at 1:46 AM
အသက် ၃၁ နှစ်၊ မိန်းကလေး၊ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ကျမ မိန်းမကိုယ်က အရမ်းကို ပူပါတယ်။ ဘာရောဂါ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမြဲကို အဖြူဆင်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်ရမယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ နောက် တစ်ခုက မိန်းမကိုယ်ရဲ့ အတွင်းနှတ်ခမ်းသားက အပြင်ကိုထွက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ထွက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားမှာ တစ်ခုက ကွဲနေတာလား ပြဲနေတာလားတော့မသိပါ။ နာတော့မနာပေမယ့် ဖြူဖြူအနှစ်လေးတွေကို ရေချိုးလို့ သေသေချာချာဆေးတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲသိချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဲဒါ ပြဲသွားတာလားလည်း သိချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မိန်းမကိုယ်ကို ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းရွရွလေး ဖြစ်နေချင်လို့ ဘာဆေးလိမ်းရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
အဖြူဆင်းတဲ့အကြောင်း စာ ၂ ပုဒ်ပို့ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးရှိတာမို့ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်မှာဖြစ်နေတာနဲ့တူတာကို ရှာပြီး ဆေးနည်းကိုလိုက်နာပါ။ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရက်လဲ မကြာပါ။ ထပ်ဖြစ်တတ်တာလဲ သတိပြုပါ။
မိန်းမကိုယ်ဖြစ်နေတာကို ရေးပြတာက သိပ်မရှင်းသေးပါ။ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ မိန်းကလေးမှာ ပြုပြင်ရလောက်အောင် ဖြစ်တောမျိုးမရှိလောက်ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှာ နုတ်ခမ်းသား အကြီး နဲ့ အသေး တစုံစီရှိတယ်။ သူတို့က ပေါင်ကားလိုက်တာတောင်မှ အဝက ဟနေမှာ မဟုတ်လောက်ပါ။ ဗဂျိုင်းနား ခေါ်တဲ့ အတွင်းပိုင်းကိုဖုံးနေတာက ပန်းရောင်ရှိတယ်။ အပြင်နုတ်ခမ်းသားဆိုတာက များသောအားဖြင့် အသားအရေအရောင်ရှိတယ်။ တချို့တော့ မတူဘူးပေါ့။ ပန်းရောင်၊ ခပ်ရဲရဲကို အလိုလိုမြင်နေရရင်တော့ တခုခုဖြစ်မလား စဉ်းစားရမယ်။ ပြဲသွားတာလား၊ ပြဲသွားသလိုနေတာလာ။ တိတိကျကျလေး ပြန်မေးပါ။ အဲဒီအတွက် စာတပုဒ်လဲ ပို့လိုက်ပါတယ်။
Tue, Oct 9, 2012 at 7:14 AM
သမီးရဲ့အဒေါ် (အသက် ၄ဝ ဝန်းကျင်။ ယောက်ျားရှိ။) လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ခန့်က သားဥပြွန်မှာ သန္ဓေတည်လို့ သားဥပြွန်တဖတ် ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါနောက်တခါ အဲ့ဒီလိုပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်မှာအလုံး၊ အကြိတ် ကင်ဆာ အစရှိတဲ့ပျက်သနာမျိုးများ ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။
အဲလိုလုပ်ထားလို့ နောက်ထပ်ဖြစ်-မဖြစ်ဆိုတာ ထူးပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ များမလာစေပါ။ ကင်ဆာ စတာတွေလဲ အဲလိုပါဘဲ။ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ တကယ်လို့ နောက်ကိုယ်ဝန်ရှိရင်တော့ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါမယ်။
Tue, Oct 9, 2012 at 7:36 PM ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန် ၃ လ ရှိပါပြီ။ အခု ချောင်းဆိုးပြီး ဗိုက်နာပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာ ၁ လ ကြာလာပါပြီ။ကလေးအတွက် စိုးရိမ်ပါတယ်။ အထွေထွေသမားတော်ကြီးက ရင်ပါကြပ်တယ်ဆိုပြီး ဆေးပေးပါတယ်။သောက်လို့ ရလားသိချင် ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ကိုယ်ဝန် ၆ ပတ် နဲ့ပျက်ဖူးပါတယ်။ ဆ၇ာရဲ့ သောက်ဆေး ညွန်းလည်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Phone နဲ့ ဆေးနာမည် မေးရတာ သိပ်မရှင်းပါ။ စာလုံးပေါင်း မှားနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်က အတော်တော့ လုံခြုံပါတယ်။
ချောင်းဆိုးကြာနေတာတော့ မကောင်းပါ။ ပျောက်အောင်ကုသပါ။ ရေးပြတာတွေက ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေထဲမှာပါတာတွေဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးဆိုတာ ခံစားနေရတာကိုသာ သက်သောစေတယ်။ ချောင်းဆိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်ကို ကုသတာမဟုတ်ပါ။
ပန်းနာဆိုရင် ပန်းတာဆေး၊ တီဘီဆိုလဲအတူဘဲ။ ပိုးဝင်ရင် ပိုးသေဆေးပေးရမယ်။
ပိုးသေဆေးကိုတော့ ကိုယ်ဝန်မှာ ရွေးပေးရမယ်။ အများဆုံး Amoxacillin 500 mg တခါသောက် ၁ တောင့်၊ တနေ့ ၂ ခါ၊ ၅-၇ ရက်သောက်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ကိုပြထားတာမို့ အကြံတခုလို့သာမှတ်ယူပါ။
Wed, Oct 10, 2012 at 10:25 AM
ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ပါ။ မိန်းမနဲ့ အတူနေတဲ့အခါ သုတ်လွတ်တာ မြန်နေပါတယ် ကျွန်တော် ပြီးပေမဲ့ သူကမပြီးသေးဘူးဖြစ်နေတယ် ကြာလာရင်ကျွန်တော့ကို စိတ်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အခုဟာက ကျွန်တော်ကောင်မလေး ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီအတိုင်းကြည့်ရင် မသိသာပါဘူး။ စမ်းကြည့်ရင်တော့ အလုံးလေးပါ။ ပေါင်မှာဖြစ်နေတာပါ။ ကိုင်လိုက်ရင်နာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ထိုင်မှသိသာပါတယ်။ ခွဲစိတ်လိုက်ရင် သနွေတည်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
ပေါင်မှာဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ နာတယ်ဆိုရင် ပိုးဝင်နေသလား၊ အောက်က အာရုံကြောကိုဖိနေသလား တခုခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ခွဲရင်လဲ ထုံဆေးဘဲဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ မေ့ဆေးကို သတိနဲ့သုံးလိမ့်မယ်။
Posted by ကောင်းကင်ပြာ at 08:25